Eserese zuru oke, ihe ngosi 3D, textures na-acha edo edo "a na-eme bred" (na oven), ụda ọdịnala, ihe ụgbọ elu dị nso na ezigbo. An add-on nke kachasi nma! Zuru okè maka ndị Fans nke nchịkọta ihe ochie. Ederede PDF gụnyere yana.
The Reid Rambler, mgbe e mesịrị mara n'okpuru Curtiss-Reid ika mgbe Reid zụrụ Curtiss bụ a biplane ọzụzụ / egwuregwu ugbo elu wuru na Canada ná mmalite 1930s na-eji na obere nọmba dị ka a na-enye ọzụzụ ugbo elu site Royal Canadian Air Force.